SOICARE 4.3L Remote Control Nnukwu ikike Cool Mist Ultrasonic Air Humidifier, China SOICARE 4.3L Remote Control Nnukwu ikike Cool Mist Ultrasonic Air Humidifier Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
Ebe nke Si Malite: Guangdong
asambodo: ISO9001-2015, O.A., RoHS
Kacha nta Order ibu: 2000 A tụkwasịrị
4.3L Remote Control Nnukwu ikike Ultrasonic Air Humidifier na hypochlorous acid mmiri na-eji
1.Remote Control and Timer Setting: Ọ dị mfe iji, ịnwere ike ịrụ ọrụ niile na njikwa ntanetị ma ọ bụ naanị otu aka nke bọtịnụ, ị nwere ike ịkwalite gburugburu gị maka ọrụ ma ọ bụ ihi ụra! 3 ngụ oge 120/240/480 na-aga n'ihu ụdịdị na a oge, ike ga-ebipụ mgbe mwube oge na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere ngafe humidification.
2.TOP-Jupụta DESIGN: Wepu mkpuchi iji tinye mmiri dị jụụ n'ime mmiri mmiri, na-agakwaghị enwe ike ịkwatu humidifier gị iji mee ka ebe ọ bụla dị ọcha, dịkwuo mfe mejupụta ma dị ọcha karịa ndị na-eme omenala. IHE: Mmiri siri ike ma ọ bụ nke a kpochara dị mma, a na-atụ aro nhicha kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu maka ahụike gị
3.HUMIDIFIER: 360 Celsius degrees n'usoro nozulu ana achi achi ọbụna larịị nke iru mmiri ekesa n'ụlọ. Kpoo ime ulo ura nke oma karia.
4.AUTO SHUT-OFF, SAFE iji: Iji zere oke iru mmiri ma hụ na nchekwa, humidifier ahụ ga-emechi akpaaka mgbe mmiri na-agbada ma ọ bụ mgbe ewepụrụ mmiri mmiri.
voltaji 220-240 / 50Hz
gosiri Power 27W
LIght 7 COlor Ọkụ ọkụ
ngwa 25 ruo 35 square mitas
Oge Ikpeazụ 15hours
Sebe a Gbanyụọ onwe gị mgbe mmiri adịghị
Unha nha 18.5X18.5x32CM
Ogo igbe agba 19X19x34CM
Pna-arụ ọrụ 12 iberibe / katoonu
Csize arton 58.5X39.5x69.5CM